Qt 6.0 yakaburitswa zviri pamutemo nekuvandudza kwakawanda | Linux Vakapindwa muropa
Qt 6.0 inyika zviri pamutemo pamwe nekuvandudza kunozoonekwa mukati nekunze
Maminitsi mashoma apfuura, Lars Knoll akaita official kumhara kwe qt 6.0. Ndiwo wekupedzisira kuburitswa kweiyi "toolkit" kana maraibhurari emipuratifomu yatiri kujaira kuverenga muLinux nyika, asi iripowo mune mamwe masisitimu edesktop, akadai Windows 10 kana macOS, uye nhare, senge iOS uye Android. Kuva nhamba inoshandura kugadzirisa, haugone kutarisira chero chimwe chinhu kuti chiuye neshanduko dzakakosha, uye zvinoita sekunge zvinosangana nezvinotarisirwa.
Ramba uchifunga kuti iyi ndiyo yekutanga vhezheni, uye izvi zvinoreva kuti harisi rese basa rinoitwa. Semuyenzaniso, mamwe maQt5 module achiri kuda kutakurwa kusvika kuQt6, chimwe chinhu chavachaita mune ramangwana, hazvizivikanwe kana mu v6.1 kana v6.2. Pakati pemamojuru aya tinowana mamwe akadai seQt Multimedia, Qt Bluetooth kana Qt Virtual Keyboard, saka Qt Kambani inoziva uye inoda kujekesa kuti Qt 6.0 haina kukura senge Qt 5.15 yazvino.
Pfungwa dzeQt 6.0
C ++ 17 yave kudiwa.
Iwo maraibhurari makuru nemaAPIs akagadziridzwa.
Nyowani mifananidzo yekuvaka. Kunyangwe OpenGL ichiripo, vabuda muQtGui muQtOpenGL module uye ndokuwedzera module nyowani inonzi QtShaderTools kubata nemitauro shader dzakasiyana dzeavo maAPI munzira yekuyambuka.
Nyowani QT Kurumidza 3D uye Qt 3D, iyo inovandudza 3D kugona.
Inopindirana nehumwe mashandiro epuratifomu.
Iyo Qt 6 package iri diki zvikuru.
Qt 6.0 inotangira chizvarwa chinotevera cheQt. Iyo haina akawanda maficha senge 5.15 parizvino, asi isu tichazadza maburi mumwedzi iri kuuya. Takaita basa rakakosha kwazvo kuisa hwaro hweiyo inotevera vhezheni yeQt. Zvizhinji zvekuchinja uku zvinogona kunge zvisingaonekwe nekukasira, asi ndinotenda zvakasimba kuti zvinobatsira kuchengeta Qt ichikwikwidza kwemakore anotevera.
qt 6.0 yave kuwanikwa uye inogona kutorwa pasi kubva Iyi link, asi pachezvangu ndingakurudzira kusaiisa kunze kwekunge iwe uri mugadziri kana kusvikira kugoverwa kwedu kweLinux kuchizopa seyakagadziridzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Qt 6.0 inyika zviri pamutemo pamwe nekuvandudza kunozoonekwa mukati nekunze
Ini pachangu, ndinonzwa kushomeka kunge QT…. pese painondikonzeresa zvakaipa vibes…. Nzira ipi yekupisa makambani aya ane madhora mashoma uye chinosuruvarisa ndechekuti ivo havana kana hanya kana mukuda kwavo vanoita zvirongwa.